Min Khant x Vestige Crew Neck Elbow-Patch Sweater – Black (Limited Edition) | Buy online | SHOP.COM.MM
Min Khant x Vestige Crew Neck Elbow-Patch Sweater – Black (Limited Edition)
By Min Khant x Vestige
Nu Yi Phyo
Min Khant Sweater
ဒီဆွယ်တာလေးကိုအရမ်းကြိုက်ပါတယ်။ မင်းခန့်ဒီဇိုင်းတွေကိုအရင်ကတည်းကသဘောကျနေခဲ့တာပါ။ ဒီဇိုင်းလန်းပြီး အသားကောင်းပါတယ်။ Read more Hide
Min Khant x Vestige
ခုနောက်ပိုင်းအရမ်းခေတ်စားနေတဲ့ဒီဇိုင်းလေးပါ။ ဒီဇိုင်းလေးကချစ်စရာကောင်းပြီး တော်တော်လှပါတယ်။ Read more Hide
Love the elbow patch
Because the elbow patch design is hot currently, I bought this Min Khant x Vestige sweater and I love it soooooo muchhhhhh. Read more Hide
Vestige နဲ့ ဒီဇိုင်နာမင်းခန့်လက်ထွက် ဒီဒီဇိုင်းလေးကို အရမ်းကြိုက်ပါတယ်။ ဒီဇိုင်နာကိုယ်တိုင်ချုပ်တာဆိုတော့ ကွာလတီအတွက်တော့ စိတ်မပူတော့ပါဘူး။ Limited Edition ဆိုတော့ အရမ်းမိုက်တယ်။ Read more Hide
Vestige ရဲ့အင်္ကျီတွေက ဒီဇိုင်းဆန်းလို့ သဘောကျပါတယ်။ Read more Hide
It isasweater withacrew neck. Near the elbow of the sleeve, there isapatch design.
Launched in 2013, VESTIGE createdaline of products inspired by the rich culture and history of Myanmar. Today, we have7stores in Yangon and2in Nay Pyi Taw. Vestige’s unique lifestyle products range from apparel, handbags, stationery, skin care, and home goods. A majority of Vestige’s inventory is sourced in Myanmar through our collaborations with artisan groups and suppliers.
Specifications of Crew Neck Elbow-Patch Sweater – Black (Limited Edition)